Taliska Qeybta 21aad Xoogga Dalka Oo Wado Dardargalinta Qorshaha Argagixisada Looga Xoreeynayo Degaanada Galmudug,
Saturday February 08, 2020 - 23:37:21 in Wararka by Mustaf Xuseen
Taliye ku xigeenka qaybta 21-aad kormeer ugu tagey Ciidamo Ka mid noqonaya qorshaha xoreynta deeganada Galmudug . Cutubyadan oo dhowaan loo diiwaan galiyay Ka mid noqoshada Ciidanka Xoogga Dalaka kuna jira dugsiga Tababarka "Aruuris" ee du
Taliye ku xigeenka qaybta 21-aad kormeer ugu tagey Ciidamo Ka mid noqonaya qorshaha xoreynta deeganada Galmudug . Cutubyadan oo dhowaan loo diiwaan galiyay Ka mid noqoshada Ciidanka Xoogga Dalaka kuna jira dugsiga Tababarka "Aruuris" ee duleedka Deegaanka Xananbuure ayaa waxaa galabta kormeer la xiriira howlaha diyaarinta ciidankan Ku gaarey G/Le Aadan Siyaad Cabdi Taliye xigeenka Qaybta 21-aad , taliyaha ayaa Warbixino ka dhageystay saraakiisha xerada iyo guud ahaan Taliska dugsiga oo kaga warbixiyay tilaabooyinka loo qaadey diyaarinta Ciidankan .
Taliye xigeenka ayaa Ciidanka kula dardaarmey isku diyaarinta howsha adag ee laga sugayo oo u baahan dhiiranaan iyo ka faaiideysiga casharada lasiinayo mudada tababarku uu socdo , Sidoo kale isla madasha ayaa lagu qabtay bandhig dhiiri galin ah oo ay soo qaban qaabiyeen kooxda Horseed ee Ciidanka xoogga Dalka qaybtooda 21-aad kuwaa oo wadaniyada iyo macnaha dhab ahaanshaha dagaalka lagula jiro cadawga dareensiiyay ciidamada Ku jira carbiskan milatari.
Deg Deg Gen Odowaa oo sheegay in Howlgal gaar ah lagu dilay Maleyshiyaad ka tirsan Al-shabaab
28/09/2020 - 14:33:28
Ciidanka Xoogga Dalka oo Al-shabaab kasoo Furtay Caruur ay u tababarayeen Qaraxyada.
26/09/2020 - 11:50:30
Danab oo Dilay Horjoogihii Al-shabaab u qaabilsanaa degaanka Mubaarak iyo Tiro Maleyshiyaad ah
24/09/2020 - 19:25:37
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka iyo Ku-Simaha Wasiirka Difaaca Dalka Oo Tababar U Soo Xiray Saraakiil Ciidan "SAWIRRO"
23/09/2020 - 19:08:43
Ciidanka Xogga Dalka oo ku wajahan deegaano ka tirsan Galgaduud.
22/09/2020 - 18:13:44
Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgal ku dilay Madaxdii Howlgalada iyo maktabka Dacawada Xisbada ee Gobolka Shabellada Hoose''Magacyada Aqriso''
21/09/2020 - 21:01:02
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegay in dagaalka Bulacle lagu dilay 16 ka tirsan Al-shabaab
21/09/2020 - 15:39:10
Ciidanka kumaandooska XDS Oo Toorotooroow Kudiray Horjoogayaal iyo Maleeshiyaad Katirsan Argagixisada.
21/09/2020 - 13:23:45
Ciidanka Xoogga dalka oo ku baxay deegaan maleeshiyada Al-Shabaab dad shacab ah ku dhibaateynayaan+Sawirro
19/09/2020 - 17:43:51
Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo soo xiray shirka doorashooyinka iyo dhammeystirka heshiisyadii Samareeb 1-3 "SAWIRRO"
17/09/2020 - 21:05:20